यूरोपतिर बरालिँदै | रुपान्तरण
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १८:१९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशको शीर्ष आसनमा छन्। उनी नियमित विदेश भ्रमणमा रुचि राख्ने नेपाली नेतामध्ये पनि सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा पर्दछन्। हालैमात्र उनी भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा गएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो भ्रमणलाई ‘प्याकेज टूर’मा ‘मिलाएको’ जस्तो थियो। अचेल पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न देशको प्याकेज टूर मिलाउने गरेका छन्। सके परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रम ओलीलाई त्यही प्याकेज टूर भिडायो होला।
हिजो शनिबार कामरेड स्विटजरल्याण्डतिर हिँडेका छन्। उनको स्विटजरल्याण्ड भ्रमण पहिलो होइन। स्विटजरल्याण्डको डाभोसमा अतिथिका रुपमा बोलाइएका प्रम ओलीले त्यहाँबाट फर्केर जेनेभा र ज्यूरिखको भ्रमण गरिसकेका हुन्। यो पटक उनी आफनो स्विटजरल्याण्ड भ्रमण सकेर उनी बेलायत पुगिसकेका छन्। त्यहाँ उनको भेट बेलायतकी महारानीसँग हुने प्रबल सम्भावना थिया। तर, उनको प्रतिनिधित्व नाती ह्यारीले गर्ने निधो भएछ। प्रम ओलीको बेलायत भ्रमण यस्तो बेलामा परेको छ कि प्रधानमन्त्री मेले गएको साता राजीनामा दिएकी छन्। बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट अलग गराउने विवादको निर्णायक टुंगो लगाउन प्रम भएकी मेको आफनै टुंगो लागिसकेको छ। विवादको टुंगो लगाउन सफल नभएपछि आँखाबाट बलिन्द्रधारा आँशु बहाउँदै उनले सरकारको नेतृत्व छाडिन्। सरकारसँगै उनले पार्टी सभापतिको पद पनि त्याग गरिन्। यसलाई मेको सौभाग्य भनौं कि दुर्भाग्य, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली प्रमको स्वागत उनैले गर्नेछिन्।
बेलायती सत्ता संक्रमणको समयमा बेलायत पुगेका प्रम ओलीसँग त्यहाँको सरकारले के नै महत्वपूर्ण कुरा गर्ला र? तैपनि, नेपालका केही आशामुखी पत्र–पत्रिकाले उनको भ्रमणले गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने आशा राखेका छन्। गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित समस्या त्यति सजिलै समाधान हुने भए उहिल्यै यो समाधान भइसक्ने थियो। बाँकी, बाटो–घाटो, पुल–नहर लगायतका सहायता नियमित भइहाले।
प्रम ओलीलाई विश्वका विभिन्न चर्चित मानिसको रुप ‘मैनको पुतला’ बनाएर सजाउने म्याडम टुसाद म्युजियमले निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन होला? नेपाली राजनीतिमा हास्य व्यंग्य शिविरका मुख्य मान्छे भएकाले टुसाद हाउसले बोलाउनु त पर्ने हो। बोलाएको छ कि छैन? त्यो थाह भएन। म्याडम टुसादका सञ्चालकहरुलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीको चमत्कारिक व्यक्तित्वका बारे पक्कै पनि राम्रो ज्ञान हुनुपर्दछ। उनी एक त्यस्ता व्यक्तित्व हुन् जो एकै रातमा खातका खात रंगीन सपना देख्न माहिर छन्। उनी आफूले देखेका सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने सपना चाहिँ कहिल्यै देख्दैनन्। त्यस्तो सपना देख्ने बानी छैन उनको।
प्रम ओलीको खूबी के हो भने, जिन्दगीमा पहिलो पटक उनको भाषण सुन्ने कुनै पनि नेपाली उनको शब्द चयन र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने सीप देखेर अभिभूत हुन्छन् र लट्ठ पर्छन्। देशमा राजाकै शासन रहेका बेला नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको खोजी गर्नेलाई उनी बयलगाडा चढेर अमेरिका नपुगिने उखान सुनाउँथे। बबुरा, अहिले आफैं गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री छन्। प्रम ओलीको चमत्कारिक व्यक्तित्वका विभिन्न पक्षका बारे बेलायती समाजलाई जानकारी दिन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले के कस्तो व्यवस्था मिलाएको छ? त्यो सार्वजनिक भएको छैन।
सुनेको कुरा, श्री ३ महाराज चन्द्र बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि भजन मण्डलीले ‘चन्द्र मयूख’ पुस्तक लेखेर उनको अभिनन्दन गरेको थियो। प्रम ओलीको भ्रमणपछि उनका अनुयायी कार्यकर्ताले ‘ओली मयूख’ प्रकाशित गरेर राणातन्त्रको झलक देखाए भने के आश्चर्य?
बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायले यो पटक प्रम ओलीको उखानकारिता र तुक्काकारिताको स्वाद प्रत्यक्ष लिन पाउनेछन्। प्रम ओलीले पाँच वर्षपछि नेपालमा रेल चल्ने, विदेशबाट आएका यात्रुहरु निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा ओर्लिएर र द्रूत मार्गबाट घण्टाभरमा नै काठमाडौं पुग्ने दिव्य जानकारी दिए कसैले पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन।
बेलायतभन्दा पहिले प्रम ओली स्विट्जरल्याण्डको अन्तराष्ट्रिय शहर जेनेभा पुगेर त्यहाँबाट हिँडी पनि सकेका छन्। त्यहाँ आइएलओले आयोजना गरेको सभामा भाग लिएका छन्। प्रम ओलीको पूर्ववर्ती पार्टी एमालेका मजदूर नेता विष्णु रिमाल र आइएलओका अधिकारीबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ। त्यसैले प्रम ओलीको स्विटजरल्याण्ड बसाइ सुविधाजनक र आनन्ददायी भएकोमा उनका शुभचिन्तक कसैले चिन्ता नलिए हुन्छ। उनी जेनेभामा उपलब्ध राम्रो होटेलमा बसे। किनभने, त्यहाँ काम गरेर बसेको कुनै नेपालीको घरमा घुस्रिने त कुरै आएन। होटलमा नै बस्नुपर्यो। प्रधानमन्त्री जस्तो मानिस लरतरो होटलमा बस्ने कुरा आएन।
स्विटजरल्याण्ड भाउ बेसाहका मामिलामा निकै दह्रो देश हो। सस्तो देश होइन। त्यसमा पनि जेनेभा संयुक्त राष्ट्रसंघको युरोपीय हेडक्वार्टर नै भयो। युरोपको न्यूयोर्क। भनेपछि, त्यो ठाउँ कति महँगो होला? सहज अन्दाज गर्न सकिन्छ। कुरा अर्को पनि छ। ओमेगा, रोलेक्स, राडो लगायत दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका घडीहरुको शहर पनि हो जेनेभा। जेनेभाको मूल बजारमा पुगिसकेपछि प्रम ओली र म्याडम प्रमले आफ्नो लोभ संवरण गर्न गाह्रै पर्यो होला। बाँकी कुरा पाठकहरुले स्वयं अन्दाज लगाउन सक्नेछन्।
स्विट्जरल्याण्डबाट बेलायत पुगेपछि प्रम ओलीको यो सिजनको असली भ्रमण शुरु हुनेछ। जनताले उनका देखाउने र चपाउने दुवैथरी दाँत देख्न पाउनेछन्। अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज भनेका त त्यस्तै उस्तै हो। बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायले यो पटक प्रम ओलीको उखानकारिता र तुक्काकारिताको स्वाद प्रत्यक्ष लिन पाउनेछन्। प्रम ओलीले पाँच वर्षपछि नेपालमा रेल चल्ने, विदेशबाट आएका यात्रुहरु निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा ओर्लिएर र द्रूत मार्गबाट घण्टाभरमा नै काठमाडौं पुग्ने दिव्य जानकारी दिए कसैले पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। उनले बेलायतमा बसेका नेपालीलाई यस्तो आश्वासन पक्कै दिनेछन्। आश्वासन अहिले पाए पनि वास्तविक विकासका लागि दुई दशक कुर्नुपर्ला। बेलायत बसेका नेपालीले मेलम्ची र बुढीगण्डकीको कुरा उठाउलान्। तामाकोशी किन लक्ष्यभन्दा ढिलो भएको छ? यो प्रश्न पनि गर्लान्। प्रश्नको उत्तर दिन प्रम ओलीलाई कसैले भेट्दैन। जहाँ बसे पनि देशका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न पाउनुलाई नेपाली जनता आफनो अहोभाग्य सम्झिन्छन्। यो भाग्य उनीहरुले युरोपमा पाउँदैछन्।
स्विटजरल्याण्ड होस् वा बेलायत अथवा फ्रान्स, प्रम ओलीको उद्देश्य पर्यटन हो। प्रधानमन्त्री पर्यटनमा छन्। राम्रै हो। तर, प्रश्न अलि घोचिलो र पेचिलो छ। के प्रम ओलीका यी भ्रमणहरुको कुनै राजकीय औचित्य छ?
बेलायतपछि प्रधानमन्त्री ओली फ्रान्स भ्रमणमा जाँदैछन्। लामो समयदेखि नेपालका प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सको भ्रमण नगरेकाले यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘हाई प्रोफाइल’ भ्रमण भनेको छ। फ्रान्समा प्रधानमन्त्रीका अन्यत्रका भन्दा अलिकति फरक एजेण्डा छन्। त्यहाँ प्रम ओलीले स्वर्गवासी पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङको आत्मालाई समवेदना दिँदै फ्रान्ससँग स्याटेलाइट खरीद सम्झौता गर्ने प्रबल सम्भावना छ। स्याटेलाइट खरीद चर्कै कमिसन व्यापारमा पर्दछ।
स्विटजरल्याण्ड होस् वा बेलायत अथवा फ्रान्स, प्रम ओलीको उद्देश्य पर्यटन हो। प्रधानमन्त्री पर्यटनमा छन्। राम्रै हो। तर, प्रश्न अलि घोचिलो र पेचिलो छ। के प्रम ओलीका यी भ्रमणहरुको कुनै राजकीय औचित्य छ? सम्बन्ध सुधार र विस्तारका नाममा प्रधानमन्त्री र विभिन्न नेताहरुको लगातार विदेश भ्रमण विलाशभन्दा बढी केही होइन। यस्ता अर्थ न बर्थका भ्रमणमा जानुभन्दा देशमा बसेर मौलिक चिन्तन गर्नु देशभक्ति हो। अहिलेको विश्व राजनीतिमा नेपालको भूमिका द्विधाग्रस्त छ। नेपाल चीनको बेल्ट एण्ड रोड नीतिमा पनि साझेदारी जनाउँछ। अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त महासागरमा पनि सहमति जनाउँछ। यो पनि प्रम ओलीकै शासनकालमा भएको छ। यति भनेपछि भ्रमणका बारे थप केही भनिरहनु पर्ला र?
(जनकपुर टुडेमा आइतबार प्रकाशित स्तम्भको अपडेटेड संस्करण।)